Le yenye yeeprojekthi ezazikho wokugqibela kumsitho wamawonga Khuthazeka ngo-2009 kudidi lweCadastre kunye neTerritorial Development. Benza nenkcazo-ntetho kaLuis Antonio Álvarez kunye noFaustino Cordero, ngePowerPoint entle kakhulu, iividiyo kunye nemephu eprintiweyo. Ngomhla wamabhaso sahlala phantsi ukuze sithethe kwaye saba nexesha elimnandi kunye nento eshiywe yi-winery, ngokuhlekisa okukhohlakeleyo saqaphela ukuba isiNgesi sakhe esivela kwi-Extremadura siye saya kwi-penalty shots kunye nomDatshi wase-Tiel owalinganisela umzuzu kubo. Sekunjalo, kwakusivuyisa ukwazi ukuba kwavela omnye umsebenzi waseSpeyin ukuze akhuthaze abanye, phezu kwako nje ukubulawa okwakuyimfuneko ukuze angawuyeki umbandela ongapheliyo.
Ngokufutshane malunga noCáceres
Ngumasipala woluntu oluzimeleyo Extremadura, eyesibini enabemi abaninzi (abemi abangama-92,000) kwaye inkulu kulo lonke elaseSpain (1,760 km2). Isixeko sasekwa ngamaRoma ngo-34 BC, ibiyindawo yelifa lehlabathi ukusukela ngo-1986.
Kwi-Extremadura, iiprojekthi zetekhnoloji ziyagqama, njengenkqubo yokusebenza ye-GNULineX kwi-Linux kernel kunye SEXTANTE ukuba ekuhambisaneni kwayo ne-gvSIG ibe nokusasazwa okuthembisayo kungekuphela nje kwindawo abathetha iSpanishi.
Ngamafutshane malunga ne-GIS yaseCáceres
Inika umdla into yokuba phantse yonke into eyenziweyo ixhaswe ngemali libhunga lesixeko; emva kweminyaka eyi-10 malunga ne-1.3 yezigidi zee-Euro ziye zatyalwa. Kodwa lo mda ufanayo uchaphazele inkqubela phambili yayo, hayi kakhulu ekufumaneni idatha kodwa kwi-automation yeenkqubo kunye nokuqinisekiswa kweSoftware. Kukho amagosa amabini kuphela asisigxina azinikeleyo kulo mbandela, kunye nekhontrakthi ethi ihlaziywe rhoqo ngonyaka ukulungiselela ulawulo lwekhasi lewebhu.
Idatha. Ubutyebi bedatha buxabiseke kakhulu, baneemephu zembali eziyimisebenzi yokwenene yobugcisa, izicwangciso zokulawula, ii-orthophotos ezivela kwiminyaka eyahlukeneyo, yakutshanje kunye neepikseli ze-10 cm. Nangona i-National Cadastre ibonelela ngepasile, baye bafaka ekhompyutheni ezinye iimvavanyo zangaphambili kwaye banolwazi oluninzi kwinqanaba le-2D kunye ne-3D yawo wonke ummandla kamasipala.
Isoftware. Ngokwezixhobo: kwinqanaba le-Intranet, abo bavelisa idatha basebenzisa i-Microstation Geographics okanye i-Powermap; Descartes kunye Power Civil amaxesha ngamaxesha. Kubasebenzisi abavela kwabanye abaxhomekeke, i-Bentley Redline ibonakala ibanike oko bayifunayo kwaye bapapasha ngaphandle kunye ne-Geoweb Publisher…………… yonke i-V8.5 kunye ne-database kwi-Access!
Bebonke banabasebenzisi abamalunga nama-60 abanxibelelana neenkcukacha zendawo kunye malunga ne-200 yemibuzo yemihla ngemihla ye-intanethi. Kwinqanaba lomxhasi, baye bakhe izicelo ezilungileyo kakhulu ze-VBA zokubuza kunye nokubonisa ulwazi, ezinye zezi ziyafumaneka kwi-intanethi.
Iziko. Ngenxa yomxholo (iSpeyin), ezininzi zobuthathaka bokulawula sele zinqotshiwe; Ndibhekisela kuzinzo lwabachwephesha, abangayi kutshintshwa ngenxa yokuba umpolitiki osemsebenzini uvakalelwa kukuba, njengoko kwenzeka kumazwe amaninzi aseSpanishi. Oku kubonakala kulungile, nangona yonke into ingahambi kakuhle, njengoko ukulawula iimali kutyalo-mali kwisebe kufuneka kuhlale kunzima.
Kwimeko nayiphi na into, indima yeziko, imimiselo yayo ekuthengisweni kweenkonzo, izivumelwano kunye nemibutho yasekhaya kunye nelizwe yenye yezona zinto zinamandla amakhulu kwi-SIG yeCáceres.
Ukupapashwa. Iphepha labo linikeza inani elihle ledatha abaye bahlula phakathi kwe-cartography, isitalato kunye nokucwangcisa. Kukho izinto ezaneleyo ezipapashiweyo, oko baye bakwazi ukuhamba nge-Geoweb Publisher: ActiveX kubasebenzisi be-IExplorer, kwezinye iiphequluli zihlala ziboniswa kunye nokucwangciswa kweemaleko kodwa kuphela njengomfanekiso. Eminye idatha isetyenziswa njengepdf.
Ndihlangula ukupapashwa, nangona kudume kakubi ukuba babone iinwele ezincinci ngenxa yokulinganiselwa kwabo kwizixhobo kunye nezibonelelo zoluntu zokuphuhlisa. Kulo mba, abakhange bakwazi ukutyhala imixholo ngokushukumisayo oko kuya kwenza idatha yonwabe kakhulu, okanye umboniso ngomthi omnye weendidi kunye neempawu kwicala lokuvula okanye ukucima nje ngokusekelwe kumdla kuya kuba kuhle kwimbali. uthelekiso.
Eyona mingeni inamandla
Ukufikelela kumagqibela-kankqoyi kuzise ulwaneliseko olukhulu kwaba bafana, ukungaphumeleli livili le-roulette kunye nesiphumo sokulinganiselwa okunokoyiswa. Nangona azilulanga ngolo hlobo.
Ulawulo lwemithombo yoqoqosho. Mhlawumbi lo ngowona mngeni unamandla weGIS yaseCáceres, into nje abantu abathathu abayenzile iyancomeka, kodwa kuya kufuneka kufumaneke iingcango zokulawula inkxaso ethile. Ndicinga ukuba kufuneka kubekho iindlela zokwenza kwinqanaba leManyano yaseYurophu, kodwa eyona nto isengqiqweni kukungangxami kwaye ulungiselele isicwangciso esichonga indlela yokwenza ulungelelwaniso lwamanyathelo ngokuthe ngcembe phakathi kokuba nedatha eninzi, ukubonelela ngeenkonzo ezininzi okanye ukudala uzinzo kwizinto sele ifunyenwe.
Kuya kufuneka sihlale phantsi kwi-geosmoke kuloo ndawo.Ngeli xesha sasithetha, sicinge ngamathuba afana nokudibanisa ukuhlaziywa kobuchwepheshe kwiprojekthi yokuhlaziya iinkonzo kunye nabahlawuli berhafu; oko kuya kuthetha ukutyala isixa semali ekuhlaziyeni iintlobo ezithile zeerhafu ezingahlawulwanga ngendlela ebekufanele ukuba zihlawulwe ngayo kwaye inxalenye yale ngqokelela ityalwe kwelo sebe.
Uphuculo lwetekhnoloji. oku kum Ndiyingozi, kodwa kufuneka wenziwe ngokukhawuleza okanye kamva; hayi ngenxa yokuba iyifashoni, kodwa ngenxa yokuba ukuyiyeka ihambe ixesha elide kudiliza uzinzo lwayo. Ukusuka kwisiseko sedatha sokuFikelela kwiOracle, ukusuka kwiJografi ukuya kwimephu yeBentley, ukusuka kwiGeoweb Publisher ukuya kwiGeospatial Umncedisi we V8i, ayithethi nje uhlaziyo lweelayisensi kuba ichaphazela zombini ukuhambelana kwedatha, ukubuyiswa kwakhona kophuhliso kunye nokuguqula i-sock kwizinto ezininzi ezitshintshileyo kule minyaka. Ulawulo olungcono lwedatha nalo kufuneka luqwalaselwe, olunxulunyaniswa neentengiselwano ukuphepha ukuhlela ngesandla okanye ukuba sesichengeni kwiziko ledatha.
Kucacile ukuba ubuchwephesha obutsha bubanika amandla okudibanisa kunye nokukhonza idatha kunye nemigangatho ye-OGC, ukulawula nokusebenza ngomgangatho ongcono, kodwa isigqibo kufuneka silinganiswe ngenxa yokuba i-corporation yamakhansela ezi ntlobo zeengxabano zinokuthi zingabikho.
Iinjongo. Lo mceli-mngeni ushiyelwe kwibhunga lesixeko, kuba kukho umsebenzi ekufuneka bewugcinile, abakwazanga ukuzixakekisa ngokugcina oko bebesele benako kunye newonga lokuba baphumelele kumagqibela kankqoyi kwi-Be Inspired 2009, uzinzo lwabo lulonke lufana nokuthatha umhlala phantsi apho. . Kodwa ngokulindela ukuba yiNkunzi yeNkcubeko yaseYurophu ngo-2016, ukuba intuition yam ayindikhohlisi, kwinto aba bafana banayo emehlweni abo ... banokuphumelela i-Be Inspired kwi-2011.
Amabhaso e-Be Inspired awanikezelwanga ngendawo ecwangcisiweyo, iSpain inokuba nomtsalane kodwa ngokuqhelekileyo ijaji lenziwe ziingcali ze-AEC ezivela kwiinkampani zabucala, iiyunivesithi, iimagazini okanye imidiya ye-intanethi. Phakathi kwamalungu angama-20 ejaji kulo nyaka kukho:
GeoTec Media -Braulio Agnes
Architect Magazine -UMike Woolf
Izalathiso Media -Sisi Zlatanova
i-calpoly -Tom Fiske
Iqela leeNgcebiso leArc
Emva kokubona enye yemigqaliselo eyenziwe kumboniso kunye neendlela ezithile ezisetyenziswa ngabagwebi bolu hlobo lokhuphiswano, i-(ethelekisekayo) innovation kwitekhnoloji yabachaphazela kumsitho wamabhaso, kuba iminyaka emi-5 eyadlulayo (2004) iprojekthi ibonise uphuhliso oluneempawu ezifana nezi:
Uyilo lwe-Multilayer, i-Oracle Database, i-100% yolawulo lwentengiselwano yewebhu.
Ulawulo lokuqukuqela olulawulwayo, olusekwe kwiindima, ezidityaniswe neProjectWise ukusuka kulwakhiwo lwedatha enkulu, ukubhaliswa kwemephu, ukuskena kunye nokukhupha iincwadi ezindala, ezinxibelelana nerekhodi yecadastral, enxibelelana neRejistri yoMhlaba (kubandakanywa nokusasazwa kwamaxwebhu askeniweyo) kunye nesicelo sokulondolozwa.
I-Microstation Geographics 8.5 kodwa nge-VBA izicelo zokufaka i-xml ngaphakathi kwe-dgn usebenzisa i-XFM (ngaphambili ukuba imephu yeBentley iphume)
Ukupapashwa kwi-VPR kunye nemixholo ephakanyiswe kwidatha ephilayo nguMshicileli weGeoweb
Isicelo sokugcinwa kwe-cadastral kwi-intanethi kunye ne-API ebomvu ngokusebenzisa abasebenzisi abanamalungelo alawulwayo.
Ukuhamba kokugcinwa kwe-cadastral ukusuka kwintengiselwano ye-intanethi, ephakanyiswe ngumthengi we-Geographics, khangela-ngaphandle kwemephu kumncedisi oyintloko, nje ukuba utshintsho lugqityiwe, gcina zembali kwi-dgn kwaye ibuyisela i-check-in ukugcina ulawulo loguqulelo.
I-automatic backup routine and replication to different repositories, kubandakanywa neyopapasho, ukukhangela iifayile eziye zalungiswa.
Imo engqongileyo yale projekthi yayahluke kakhulu, iqhube kwimali-mboleko yeBhanki yeHlabathi, kunye nemida yeziko ngenxa yemeko yayo, esasokola ngayo. Iindleko zolo phuhliso lwaba $270,000 (kungabandakanyi ilayisenisi), kuthetheleleka phambi kweprojekthi apho kufuneka kuthathelwe kwinqanaba le-maquila imisebenzi ephuma kwi-cadastral sweep kwinqanaba lelizwe kunye nokuphuculwa kweRejistri yePropati, kubandakanywa utshintsho lwephepha lomntu kwi-real folio.
Ixabiso kunye neeLayisenisi kwiinguqu ezintsha ze-AutoCAD 2014